Books पुस्तकहरू पढ्न जारी राख्न जब तपाईं पछाडि स्कूल जानुहुन्छ वर्तमान साहित्य
Books पुस्तकहरू पढ्नको लागि जब तपाईं पछाडि स्कूल जानु हुन्छ
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, युवा साहित्य
छुट्टि सकियो र सेप्टेम्बरमा फेरि जीवन आउँदछ दैनिक जीवन। अलार्म घडी, काम, तालिका र ... विद्यालय वा संस्थानमा फर्कनुहोस्। नयाँ पाठ्यक्रम, साथीहरू, नयाँ सहपाठी र नयाँ शिक्षकहरू। फेरि कक्षा, पुस्तक, गृहकार्य, परीक्षा, ब्रेक ...
तर तपाईं पढ्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ आनन्द लागि। साना बच्चाहरूले कसरी यो गर्ने भनेर सिक्न जारी राख्नु पर्छ र जेठाले मात्र किनभने, यो रमाईलो छ र तपाईं पनि सिक्नुहुन्छ। यी हुन् सबैका लागि books पुस्तकहरू। अधिक समकालीन र अधिक क्लासिक शीर्षकहरू। सबै रोचक।
1 लुलुलाई स्कूल मन पर्छ - क्यामिला रिड
2 म स्कूल जान धेरै जवान छु - लरेन बच्चा
3 विद्यालयमा चुनौती - ऐडन कक्षहरू
4 निजी विद्यालय - कर्टिस सिटेनफेल्ड
5 ग्रेग डायरी - जेफ किन्नी
6 टोरेस डि मालोरीमा पहिलो वर्ष र जुम्ल्याहा स्कूलहरू परिवर्तन हुन्छन् - एनिड ब्लाइटन
लुलुलाई स्कूल मन पर्छ - क्यामिला रिड
De 2013 र मात्र संग १००० पृष्ठहरू, यो Lulu साहसिक सबै भन्दा राम्रो को लागी आदर्श हो सानो पाठकहरू। Lulu गाथामा सबै पुस्तकहरू, द्वारा बनाईएको बेलायती लेखक क्यामिला रिड, उनीहरु स्वादिष्ट छन् र यी तिथिहरूका लागि उपयुक्त यो हो। उही हो र लुलुको स्कूलको पहिलो दिन र त्यो धेरै नर्भस हो। समस्या यो हो कि ऊ आफ्नी आमालाई बिदा लिन चाहन्न र उसको मुख्य चिन्ता उसले साथी बनाउने छ कि छैन। तर लुलु साहसी बन्ने निर्णय गर्दछ र स्कूल कति रमाईलो हुन सक्छ भनेर पत्ता लगाउँदछ।
म स्कूल जानको लागि धेरै जवान छु - लरेन बच्चा
लरेन बच्चा उनी पनि बेलायती हुन् र उनको शृ .्खार ताराहरू जुआन र टोलोला यो समकालीन बाल साहित्यहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यो टेलिभिजनमा पनि देख्न सकिन्छ। यो साहसिक हो 2005 र यसमा 39। पृष्ठहरू छन्। जुआनले आफ्नो सानी बहिनी टोलालालाई विश्वास गर्नुपर्नेछ अब उसको स्कूल जाने समय आएको छ। तर टोलालालाई निश्चित छैन र जुआनलाई यो गर्नको लागि सबै कल्पनाहरूको आवश्यक पर्दछ।
विद्यालयमा चुनौती - ऐडन कक्षहरू
कोठा एक हो बच्चाहरू र युवा व्यक्तिको साहित्यको प्रसिद्ध लेखक। यो २०११ शीर्षक पहिले नै मा क्लासिक भएको छ बदमाशी। १२ बर्षबाट।
हामीलाई कथा बताउँछ लुसी हल, जसको लागि स्कूल जाने नरक हो। त्यहाँ मेलानी प्रोसर र उनका दुई साथीहरू उनको लागि एकमात्र उद्देश्यको लागि पर्खिरहेका छन् उसको दिन कटु बनाओ। लुसीलाई थाहा छैन के गर्ने, तर भाग्यले तपाईंले सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ उसको साथी एंगस र अन्य सहकर्मीहरूबाट।
निजी विद्यालय - कर्टिस सिटेनफेल्ड
यो थियो पहिलो उपन्यास यस अमेरिकी लेखक को, मा प्रकाशित 2005। संयुक्त राष्ट्र किशोरावस्था पोर्ट्रेट सबै यसको clichés को साथ, तर त्यसले सँधै ध्यान आकर्षण गर्दछ।
नायक हो ली फियोरा, एक सामान्य केटी जो एक मा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त हुन्छ प्रतिष्ठित कलेज। त्यहाँ, अमेरिकी समाजमा सबैभन्दा प्रभावशाली र करोडपति परिवारका बच्चाहरू अध्ययन गर्छन् र लीले अलि बढी निराश महसुस गरे। यो छ धेरै सामान्य, त्यसैले सबै भन्दा लोकप्रिय उनको अस्वीकार, तर उनी पालन गर्छन्।
साथै गोप्य रूपमा प्रेम मा छ क्रस शुगरम्यान, जो उनलाई पनि समान छ। यसैले उनीहरूले सम्बन्ध सुरू गर्छन् र ली अब सीमान्तकृत हुँदैनन्, तर उनको प्रदर्शन पनि घट्छ। सबै गलत हुन्छ जब तपाइँको सार्वजनिक गुनासो एलिस्टिस्ट स्कूली विद्यार्थीहरूको परम्परा र रीतिथितिहरूको बारेमा क्रसलाई सम्बन्ध अन्त्य गर्न अग्रसर गर्दछ।
ग्रेग डायरी - जेफ किन्नी
कसरी क्लासिक सिफारिश छैन। र अमेरिकी कार्टुनिस्ट जेफ किन्नेको ग्रेग हुनुहुन्छ सबैभन्दा सफल मध्ये एक उनको पछि २०० famous मा प्रसिद्ध डायरी.
ग्रेग हेफली उहाँ १२ बर्षको हुनुहुन्छ र उहाँकी आमाले एउटा अखबार किन्छ पाठ्यक्रम को शुरुआत। यो हामी कसरी उहाँलाई चिन्छौं जबकि उसले हामीलाई उसको कहिलेकाँही हास्यास्पद (र कहिलेकाँही यति धेरै हुँदैन) साहसिक कार्यहरूको बारेमा बताउँदछ। को उत्कृष्ट चित्रण प्रत्येक अनुच्छेद तिनीहरूले पूर्ण एक कथा रचना हास्य, सहानुभूति र सजिलो पढ्न सबै उमेरका लागि वास्तवमा।
टोरेस डि मालोरीमा पहिलो पाठ्यक्रम y जुम्ल्याहा स्कूल बदल्छन् - एनिड ब्लाइटन
र पक्कै पनि Quintessential कलेज रोम साहसिक किशोर साहित्यको सबैभन्दा प्रसिद्ध बोर्डि schools स्कूलहरूमा: टोरेस डे मालोरी र सान्ता क्लारा।
एनिड ब्लाइटon, जो विधाको सबैभन्दा प्रसिद्ध लेखक मध्ये एक हो, यी दुई सागा बनाउँदछ कि जीवन चित्रण विशिष्ट अंग्रेजी बोर्डि schools स्कूलहरू केटीहरूको लागि। उसको कारनामहरू र एन्टिक्सहरू, हिंड्नेहरू, उनका खेलहरू लाक्रस, तिनीहरूको नास्ता पूर्ण पेस्ट्री, चियाको थर्मस, जिंजरब्रेड कुकीहरू, नींबू पानी ... र उनीहरूको राती पार्टीहरू.
यसमा मालोरी टावर्स (गाथा १ 1946 1951 देखि १ XNUMX .१ सम्म लेखिएको) नायक हो डरेल नदीहरू। १२ वर्षको उमेरमा यो उसको पहिलो वर्ष हो र ऊ १ 12 वर्ष नपुगुञ्जेल सम्म पढ्न जारी राख्छ। शरारतीहरूसँग उसको पहिलो मित्रता एलिसिया र शान्त सैली ... तर त्यहाँ अरू सबै जस्तै छन् मेरी-लू, बेट्टी, क्याथरिन वा ग्वेन्डोलिन मरियम। र शिक्षकहरु लाई मन पर्छ mademoiselles रौगियर र डुउन्ट, मिस पॉट्स, मालकिन वा हेडमिस्ट्रेस ग्रेलिray
Y जुम्ल्याहा स्कूल बदल्छन् यो स्कूलको गाथाको पहिलो शीर्षक हो स्यान्टाक्लारा। नायकहरू हुन् प्याट र इसाबेल ओ सुलिवान, जो उनीहरू साथीहरू जस्तै उस्तै स्कूलमा जान चाहान्छन्, तर उनकी आमाले उनीहरूलाई सान्ता क्लारामा पठाउन निर्णय गर्नुभयो। र जे होस् सुरुमा तिनीहरू स्वीकार्छन्, तिनीहरू निर्णय गर्छन् कि तिनीहरू आफैँलाई समर्पण गर्छन् शरारत बनाउनुहोस् ताकि तिनीहरूले स्कूलहरू परिवर्तन गरे। अवश्य पनि सबै चीजहरू परिवर्तन हुनेछ जब उनीहरू आफ्ना सहपाठी र शिक्षकहरूबारे जान्छन्।
को नयाँ संस्करण चित्रको चित्रणका साथ यी शीर्षकहरूको एन्रिक लोरेन्जो.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » युवा साहित्य » Books पुस्तकहरू पढ्नको लागि जब तपाईं पछाडि स्कूल जानु हुन्छ